भक्तपुर घ’टना : बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा सुदीपले रोजे परिवारकै अ’न्त्य गर्ने बाटो ! ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/भक्तपुर घ’टना : बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा सुदीपले रोजे परिवारकै अ’न्त्य गर्ने बाटो ! !
भक्तपुर घ’टना : बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा सुदीपले रोजे परिवारकै अ’न्त्य गर्ने बाटो ! !
काठमाडौं । भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका–९ घर भएका ३६ वर्षीय सुदीप अधिकारी भदौ २१ गते श्राद्ध खान आफ्नो ससुराली पुगेका थिए । १७ वर्षीय छोरा सुशान्तलाई समेत साथमा लगेका सुदीप त्यसै दिन घर फर्किसकेका थिए । छोरा सुशान्त भने त्यसदिन आफ्नो मामाघरमै बसे । सुदीप दोस्रो दिन छोरालाई लिन ससुराली पुगेका थिए । भदौ २२ गतेसम्म आफन्तको सम्पर्कमा रहेका सुदीप र उनको परिवारका सदस्यको शुक्रबार (भदौ २६ गते) साँझ घरभित्रै श’व फे’ला पर्‍यो ।
शुक्रबार साँझ सुदीपकी भाइबुहारी मासु पुर्‍याउन आफ्ना जेठाजु (सुदीप)को घर गएकी थिइन् । घर पुग्दा उनले भतिजा सुशान्तलाई बोलाइन् । जेठानी दिदीलाई पनि बोलाइन् । कसैको आवाज नसुनेपछि ढोका ठेलेर भित्र जाँदा भतिजा सुशान्त, जेठानी दिदी सम्झना र जेठाजु सुदीपको श’व भेटेपछि आफ्ना पति सुनीललाई बोलाइन् ।
शुक्रबार साँझ करिब ५ बजे सुदीपका भाइ सुनीलले खबर गरेपछि महानगरीय प्रहरी प्रहरी परिसर भक्तपुर, वृत्त थिमि, महानगरीय अप’राध महाशाखा, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र फरेन्सिक विज्ञको टोली घट’नास्थल पुगेको थियो ।
घट’नास्थलमा प्रहरी पुग्दा सुदिपको श’व घरको कौसीको ढोकामा घोप्टिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । उनकी पत्नी ३४ वर्षीया सम्झनाको श’व दोस्रो तलाको ओछ्यानमा र १५ वर्षीय छोरा सुशान्तको श’व पहिलो तलाको ओछ्यानमा घो’प्टिएको अवस्थामा फे’ला परेको थियो ।
घट’नास्थल पुगेको प्रहरीले घरमा रहेको कुकुर समेत मरेको अवस्थामा फे’ला पार्‍यो ।
घ’टनाको अनुसन्धान गरिरहेको महानगरीय अ’प’राध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापा श’वको प्रकृति हेर्दा सुदीपका छोरा सुशान्त र श्रीमती सम्झनाको केही दिन पहिले नै मृ’त्यु भइसकेको थियो भने सुदीपको बिहीबारतिर मृ’त्यु भएको हुनसक्ने बताउँछन् ।
ऋणको बोझ र पारिवारिक त’नाव
महानगरीय अप’राध महाशाखाका एक अधिकारी सुदीपको परिवारका सबै सदस्यको मृ’त्युसँग ऋण जोडिन पुगेको बताउँछन् ।बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सुदीपको परिवारमा त’ना’व बढ्दै गएको थियो । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका क्रममा सुदीपले आफ्नो घर धितोमा राखेर कृषि विकास बैंकबाट २३ लाख ८५ हजार ऋ’ण लिएका थिए । तर, उक्त ऋ’णको ब्याज समेत तिर्न नसकेपछि पारिवारिक त’नाव बढेको थियो ।
बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज समेत तिर्न सम’स्या भएपछि सुदीपले २ महिना अगाडि मात्रै ससुरालीबाट २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ससुरालीबाट ऋण लिएपछि भने उनीहरुको घरमा झन तना’व बढेको सुदीपका छिमेकीले प्रहरीलाई जानकारी दिएका छन् ।
सुदीप बेरोजगार जस्तै थिए भने श्रीमती भने आफ्नो घरको सटरमा पसल चलाउँथिन् । सुदीप दिनदिने मदिरा सेवन गर्न थालेपछि श्रीमान्–श्रीमतीबीच झग’डा हुने गरेको छिमेकीले प्रहरीलाई बयान दिएका छन् ।
छिमेकीले प्रहरीलाई दिएको जानकारी अनुसार परिवारका सदस्यको श’व फे’ला पर्नु अगाडि भदौ २३ गतेसम्म उनीहरुको पसल खुल्ला थियो । भदौ २३ गते सुदीप एक्लै पसलमा थिए । तर, त्यसयता उनका परिवारका सदस्य कसैलाई पनि बाहिर नदेखेको स्थानीयले प्रहरीलाई बयान दिएका छन् । प्रहरीका अनुसार श’व परीक्षण प्रतिवेदन (पोस्टमार्ट रिपोर्ट)मा पनि सुदीपकी श्रीमती सम्झना र छोरा सुशान्तको मृ’त्यु २४ गते बिहान २–३ बजेतिर भएको देखिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार सम्झना र सुशान्तको मृ’त्यु टाउकोमा कुनै ठूलो बस्तुले प्रहा’र गरिएको समेत देखिएको छ । यस्तै, सुशान्तको घाँ’टी समेत रेटिएको छ । पोस्टमार्टम रिपोर्टमा भएको विवरण उल्लेख गर्दै अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी सम्झना र सुशान्तको ह’त्या सुतेको अवस्थामा भएको बताउँछन् ।
तर, ह’त्यामा बाह्य व्यक्ति भन्दा सुदीपकै हात रहेको देखिन्छ । ‘हालसम्मको अनुसन्धानले सुदीपले नै श्रीमती र छोराको ह’त्या गरेपछि आ’त्मह’त्या गरेको देखिन्छ,’ अप’राध महाशाखाका अनुसन्धान अधिकारी भन्छन् । प्रहरीका अनुसार सुदीपको घर नजिकै से’ल्फा’स नामक विषा’दीको बट्टा समेत फे’ला परेको छ । यस्तै, वि’ष घोलीएको कचौरा र एउटा धारि’लो हति’यार समेत बरा’मद भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
सुदीपले नै धा’रिलो ह’ति’या’रको प्रयोग श्रीमती तथा छोराको ह’त्या गरेको र पछि भन्सामा गएर विषय सेवन गरी आ’त्यमह’त्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले घट’नास्थलबाट बरा’मद भएका दसी प्रमाणहरुको फरेन्सिक परीक्षण गर्न केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको छ । फरेन्सिक परीक्षणको रिपोर्ट भने आइसकेको छैन ।
प्रहरीका अनुसार सुशीलको श’व सेतो र सुशान्तको श’व पहेँलो बस्त्रले छोपिएको थियो । सुदीपले नै श्रीमती र छोराको ह’त्या गरी श’व क’पडाले छोपेको र विरत्तिर पछि आफूले पनि आ’त्मह’त्या गरेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । अप’राध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी थापा पनि घट’नाको प्रकृति हेदा त्यसमा बाहिरका व्यक्तिको संलग्नता नभएको बताउँछन् ।
‘दुई जना (सम्झना र सुशान्त)को ह’त्या एउटै प्रकृति र प्रकारको छ । धा’रि’लो ह’तिया’र प्रयोग भएको छ । तर, सुदीपको फरक छ । बाहिरका व्यक्तिले ह’त्या गरेको भए सबैको मृ’त्यु (ह’त्या) एउटै प्रकृतिको हुन्थ्यो,’ एसएसपी थापा भन्छन्, ‘घरका सामानहरु पनि जस्तोको त्यस्तै छन् । घ’ट’ना र घ’ट’नास्थलको प्रकृति हेर्दा त्यसमा बाहिरका व्यक्ति संलग्न भएको सम्भावना कम छ ।’
कल्पनाको माइती घर पुग्दा ! आमाले खोलिन यस्तो रहस्य | घरमा आएर यस्तो नाटक गरेकी रहेछिन (हेर्नुहोस भिडियो)